Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Iingcebiso ngeVolcano zikhutshwe eHawaii
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba Eziphambili zaseHawaii • Kamaainas • iindaba • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Iinyikima ezingaphezu kwe-140 zidume kwi-Big Island yaseHawaii ukusukela ngokuhlwa izolo, ngoMvulo, nge-23 ka-Agasti 2021.
Ezi nyikima zincinci kunye neenyikima ziqhubekile kumyinge malunga neenyikima ezili-10 ngeyure, isizathu esaneleyo sokukhupha iingcebiso.
IHawai'i Volcano Observatory iyavala ukubeka esweni umsebenzi eKrauea crater apho iinyikima zenzeka khona.
Uhlaziyo lwemihla ngemihla luya kukhutshwa yiHawai'i Volcano Observatory kude kufike esinye isaziso.
I-Hawai'i Volcano Observatory e IPaki yeSizwe yaseHawaii ujonge lo msebenzi kwaye ecebisa ngononophelo ukuba iKrauea crater ayiqhambuki. I-HVO iyaqhubeka nokubeka iliso ngokusondeleyo kwinyikima kaKilauea, deformation, kunye nokukhutshwa kwerhasi kulo naluphi na utshintsho lomsebenzi.
Ngeli xesha lokubhalwa, abukho ubungqina bokuba lava kumphezulu weKlauea crater, nangona kunjalo, kwabakho utshintsho kuguquko lomhlaba kwii-tiltmeters kwingingqi yase-Kilauea. Oku kungabonisa ukuba i-magma isela i-0.6 ukuya kwi-1.2 yeemayile ngaphantsi kwe-caldera kwaye ihambela emazantsi e-crater.
Ubushushu bukaPele - uthixokazi weentaba-mlilo
Nabani na ovela eHawaii uza kukuxelela ukuba umsebenzi wentaba-mlilo kwezi ziqithi ngumyalezo ovela kuPele, udidi lwentsomi yaseHawaii. Unguthixokazi womlilo, umbane, umoya, umdaniso kunye neentaba-mlilo.
UPele unobuntu obunomdla kwaye obungenakulinganiswa obugqitywa ngomsindo onobundlobongela, okwenza umsindo wakhe waziwa ngohlobo lokuqhuma kwentaba-mlilo. Uzitshabalalisile iidolophu namahlathi njengodederhu olusuka ezintabeni luye elwandle.
Ingxelo ithi uyaphila kwiHalemaumau crater kwingqungquthela yaseKilauea, enye yeentaba-mlilo ezisebenzayo kwihlabathi.
UPele uhlala ebonakaliswa njengomhambi kwaye ukumbona kuye kwaxelwa kuso sonke isiqithi sesiqithi kangangamakhulu eminyaka, kodwa ngakumbi kufutshane nemingxuma yentaba-mlilo kufutshane nekhaya lakhe laseKilauea. Kule mibono, ubonakala ngathi uyintombazana entle kakhulu ende okanye ungathandeki kwaye ungumfazi osekhulile obuthathaka uhlala ehamba nenja emhlophe. Intsomi ithi uPele uthatha le fomu yomfazi osele engqiba efuna ukuvavanya abantu- ebabuza ukuba banokutya okanye basele na ukuze babelane. Abo banesisa kwaye babelana naye bayavuzwa, ngelixa nabani na obawayo okanye ongenabubele ohlwaywa ngamakhaya abo okanye ezinye izinto zexabiso ezitshatyalalisiweyo.
Abandwendweli baseHawaii baya kuva ukuba uPele uza kuqalekisa nabani na osusa amatye odaka kwikhaya lakhe lesiqithi. Kude kube namhla, amawaka amaqhekeza elitye lentaba-mlilo athunyelwe nge-imeyile abuyele eHawaii evela kubahambi kwihlabathi liphela abathi banyanzelekile ukuba babe namashwa kunye namashwa ngenxa yokuthatha amatye e-lava agoduke nawo.
IHawai'i Volcano Observatory iya kukhupha uhlaziyo lweKilauea mihla le de kufike esinye isaziso.